Nomena Mari-pankasitrahana ny Vavolombelon’i Jehovah Satria Ampianariny Baiboly ny Voafonja any Kolombia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Indonezianina Iokrenianina Italianina Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tiorka Tseky Yorobà
Kilasy fianarana Baiboly any amin’ny fonjan’i Barranquilla.
Ilay mari-pankasitrahana avy amin’ny Tobim-pampianaran’i Paulo Freire, izay midera ny Vavolombelon’i Jehovah noho ny fampianarana Baiboly ataon’izy ireo ao amin’ny fonjan’i Valledupar.
Efa 20 taona mahery izay ny Vavolombelon’i Jehovah any Kolombia no nampianatra Baiboly maimaim-poana ny voafonja. Nomen’ny Tobim-pampianaran’i Paulo Freire mari-pankasitrahana izy ireo, tamin’ny 30 Novambra 2018, satria mampianatra Baiboly an’ireo voafonja any Valledupar. Voafonja 50 izao no miantra Baiboly ao.
Mampianatra Baiboly any amin’ny fonja 65 manerana an’i Kolombia ny Vavolombelon’i Jehovah, ary voafonja 782 no ampianariny. Efa 60 izay no natao batisa, hatramin’ny 1996.
I Néver Antonio Cavadía sy Lety Cavadía vadiny. Nianatra Baiboly tany am-ponja izy ary anti-panahy izy izao.
Nianatra Baiboly tany am-ponja, ohatra, i Néver Antonio Cavadía ary natao batisa tamin’ny 1998. Nafahana avy tao amin’ny fonjan’i Valledupar izy, tamin’ny 2007. Tena nahasoa azy ilay fianarana. Hoy izy: “Niaro ahy ny toro lalan’ny Baiboly sady nanampy ahy hahay hanapa-kevitra tsara, tamin’izaho tany am-ponja. Ireny koa no nahatonga ahy hiova be sy hanana fanantenana foana.”
Miezaka mitory amin’ny voafonja ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany, satria fantany hoe sitrapon’i Jehovah “ny hamonjena ny karazan’olona rehetra sy ny hananany fahalalana marina tsara ny fahamarinana.”—1 Timoty 2:4.